Qatar Airways GCEO no mandray ny takarivan'ny Parlemantera eropeana voalohany
Home » Ny olona ao amin'ny Travel & fizahan-tany » Qatar Airways GCEO no mandray ny takarivan'ny Parlemantera eropeana voalohany
Lehiben'ny mpanatanteraka ao amin'ny vondrona Qatar Airways, Andriamatoa Akbar Al Baker no nihaona tamin'ireo mpikambana ao amin'ny Parlemanta eropeana manan-kaja sy mpanapa-kevitra ambony ao amin'ny kaomisiona eropeana tamin'ity herinandro ity tany Bruxelles, Belzika. Ny tanjon'ny andiana fihaonambe sy ny sakafo hariva VIP any afovoan'i Eropa dia ny hanamafisana ny fifandraisana efa matanjaka izay ankafizin'ny kaompaniam-pitaterana miaraka amin'ny MEP lehibe ary hanehoana ny fahavononan'i Qatar Airways ho an'ny Vondrona Eropeana, faritra lehibe indrindra eto an-tany.
Nandritra ny fitsidihana, IZY Andriamatoa Akbar Al Baker dia nanao fihaonambe nahomby niaraka tamin'ny MEP Andriamatoa Ramon Tremosa; MEP Andriamatoa Jose Ignacio Salafranca ary MEP Andriamatoa Ismail Ertug ao amin'ny Parlemanta eropeana any Bruxelles, renivohitr'i Eropa.
Nihaona tamin'ny Kaomisera eoropeanina sy ny filoha lefitra, Andriamatoa Maroš Šefčovič ary Andriamatoa Henrik Hololei, Tale jeneraly, fivezivezena ary fitaterana ho an'ny vaomiera eropeana ny Andriamatoa Lehibe.
Ny Lehiben'ny mpanatanteraka ao amin'ny vondrona Qatar Airways, Andriamatoa Akbar Al Baker, dia nilaza hoe: "Ny fanampiana natolotra ho an'ny firenentsika sy ny kaompaniam-pitaterana ataon'ny mpanapa-kevitra ambony eropeana dia tena sarobidy sy ankasitrahana. Tonga eto isika anio amin'ny fanahin'ny fikatsahana tombony azo amin'ny sidina ho an'ny indostria sy orinasa, safidy bebe kokoa ho an'ny mpandeha, ary fanambinana maharitra ho an'ny toekarentsika, ary tsy isalasalana fa hahomby isika.
“Ankafizinay ny fisokafana sy ny fahatakarana izay nasehon'ny UE. Misaotra ny EU ihany koa izahay noho ny fahalalahana sy ny fanampiana omena ny Fanjakan'i Qatar amin'izao sakana izao. ”
Nandritra ny takariva, MEP mihoatra ny 16 no nankafy ny sakafo hariva VIP niaraka tamin'ny lahateny lehibe tao amin'ny Salon ho an'ny filoham-pirenena mahatalanjona tao amin'ny Parlemanta Eoropeana, miaraka amin'ny fomba fijery mahavariana momba ny tanànan'i Bruxelles.
Ity fitsidihana ity dia tonga tamin'ny fotoana nanakatonan'i Qatar sy ny EU ny dingana farany tamin'ny fifanarahana fitaterana an-habakabaka EU-Qatar, izay nanolotra ny Fanjakana Qatar sy Qatar Airways sehatra iray tena tsara hifampiresahana amin'ireo mpiara-miasa aminy eropeana momba ny fitomboana mety sy ny fiaraha-miasa amin'ny ho avy eo amin'ny roa tonta.
Miaraka amin'ny sidina 617 isan-kerinandro mankany Eropa, Qatar Airways dia manidina eo ho eo amin'ny mpandeha 91,000 50 isan-kerinandro amin'ireo tanàna manan-danja mihoatra ny 18 ao amin'io faritra io. Nandritra izay 15 volana lasa izay, nanatsara izany hatrany ny kaompaniam-pitaterana amin'ny alàlan'ny fandefasana zotra vaovao 56 mankany Eropa, ao anatin'izany ny Nice, Dublin, Malaga, Prague ary London Gatwick. Ny fandefasana zotra manaraka dia kasaina amin'ny taona manaraka ao anatin'izany i Lisbon sy Valletta, izay hahatratra ny XNUMX ny isan'ny toerana itodiana any Eropa.
Qatar Airways dia nandefa ny asany tany Bruxelles tamin'ny Janoary 2011 niaraka tamin'ny serivisy dimy heny isan-kerinandro. Nampiakarina ho serivisy isan'andro amin'ny volana febroary 2013 ary nitombo ho serivisy in-valo isan-kerinandro tamin'ny desambra 2015. Ny karazana fiaramanidina Boeing B777 dia miasa ankehitriny.
Ny Malta Tourism Authority dia nandefa sehatra fiofanana vaovao momba ny maso LGBTQ +